आचारसंहिता लगाउने भन्दापनि सोसल मिडियालाई स्वतन्त्र नै रहन दिनुपर्छ-स्वर्णिमा श्रेष्ठ - MeroReport
आचारसंहिता लगाउने भन्दापनि सोसल मिडियालाई स्वतन्त्र नै रहन दिनुपर्छ-स्वर्णिमा श्रेष्ठ
आफुलाई ग्लोबल सिटिजन भन्न रुचाउने उनी काठमाडौं मै जन्मि हुर्केकी हुन । साथै सञ्चार तथा युवाका मुद्दाहरुमा काम गर्न रुचाउने उनले आफ्नो करियरको शुरुवात पनि किशोरकिशोरी तथा यूवा लक्षित चर्चित रेडियो कार्यक्रम ‘साथी संग मनका कुरा’को कार्यक्रम उत्पादकको रुपमा गरेकी थिईन । डेभलपमेण्ट सञ्चारमा स्नाकोत्तर गरिरहेकी उनी अर्थात स्वर्णिमा श्रेष्ठ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्शनको सञ्चार शाखामा कार्यरत छिन् । विभिन्न प्रकारका संञ्चारका सामग्री तथा सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर यूवाका व्यवहार परिवर्तन तथा विकासका कार्यहरुमा सहयोग पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गरिरहेकी श्रेष्ठ ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै स्वर्णिमा श्रेष्ठलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
मेरो सोसल मिडियामा रुची तथा राम्रो दख्खल छ । मेरो कामको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सोसल मिडियाहरुको प्रयोग गरी विभिन्न महत्वपूर्ण सन्देशहरु लक्षित व्यक्तिहरुसम्म पुर्‍याउनु तथा अरुलाई पनि सोसल मिडियाको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु भएकोले म आफै पनि धेरै मात्रामा यसको प्रयोग मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर कामै लागिगरिरहेको हुन्छु । तर पनि ब्लगर नै भनेर आफुलाई चिनाउने तहसम्म पुगिसकेको छु जस्तो लाग्दैन ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://swarnima musings.blogspot.com/ मात्रै हो या यस बाहेक अरु पनि छन्?
यो बाहेक मैले मेरोरिपोर्टकै लागिपनि लेख्ने गरेको छु । त्यो बाहेक http://practicalaction.org/ तथा http://www.rotaractbroyal.org.np/ को लागि पनि योगदान गर्ने गरेको छु । हुन त गोप्य कुरा हो, मैले आफ्नो नाम उल्लेख नहुने गरी एउटा गोप्य ब्लग पनि चलाउने गरेको छु, त्यसको ठेगाना चाँहि तपाई आफैले पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा भने बढी व्यक्तिगत कुरा लेख्ने गरेको छु ।
धेरैजसो मेरो ब्लगमा विभिन्न ठाउँ भ्रमण गर्दाको अनुभवका कुराहरु हुन्छन् । तर यो यात्रा वृतान्त जस्तो भने छैन, आफुले विभिन्न ठाउँमा देखेको, भोगेको तथा अनुभव गरेको कुराहरु नै ब्लगमा उतार्छु । भ्रमणले मलाई उर्जा प्रदान गरेको जस्तो महसुस हुन्छ र केहि नयाँ काम गरेपछि त्यो अनुभवलाई व्यक्त गर्न मन लाग्छ । त्यो बाहेक सामाजिक मुद्दाहरुको बारेमा भने ब्यवसायिक वेबसाइटका ब्लगहरुमा लेख्ने गरेको छु ।
ब्लगिङ गर्न कहिले देखि थाल्नुभयो?
ब्लगिङ गर्न सन् २०११ को पहिलो दिन देखी सुरु गरेको हुँ । मेरो त्यस वर्षको नँया वर्षको संकल्प नै आफ्नो ब्लग शुरु गर्छु भन्ने रहेको थियो । मेरो डायरी लेख्ने बानी सानै देखीको हो । आफ्नो अनुभव, भोगाई तथा पढेका किताब तथा हेरेका चलचित्रहरुको बारेमा लेखेर थुप्रै डायरीहरु भरेको थिएँ । ब्लग लेखन त्यसैको निरन्तरता हो ।
लेख्न मलाई मनपर्छ । आफ्नो मनको कुराहरु म बोलेर भन्दा लेखेर व्यक्त गर्न मनपराउँछु । लेख्दा मन हलुका भएको जस्तो महसुस हुन्छ । ब्लगिङ गर्नुको कारण पनि त्यहि नै हो । केही राम्रो कुरा लेखेर पोष्ट गर्दा खुसी लाग्छ, सन्तुष्टि पाउँछु । मेरो विभिन्न कुराको लेखनमा धेरै समय बित्छ, काममा पनि रिपोर्ट, सफलताका कथा आदि कुराहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि होला ब्लगिङको लागि धेरै समय छुट्याउन सकिरहेकी छैन । फेरी आफैले लेखेको कुरा आफुलाई चित्त नबुझेसम्म म पोष्ट गर्न सक्दिन ।
नयाँ नयाँ ठाँउको भ्रमण गर्न मलाई एकदम मनपर्छ । लेख्नको लागि पनि यसबाट नै उर्जा मिल्छ । मलाई बाह्य क्रियाकलापहरु मनपर्छ । त्यसैले समय समयमा हाइकिङ्, साइक्लिङ् र्‍याफ्टिङ् जस्ता गतिविधिमा सहभागी भईरहेकी हुन्छु । मेरो अर्को रुची किताब पढ्नु हो । म विश्व साहित्यका आख्यान पढ्न रुचाउँछु । म विश्वको विभिन्न देशका सिनेमा पनि रुची पुर्ण रुपमा हेर्छु । किताब र सिनेमाको समिक्षा लेखनमा पनि मेरो रुची छ ।
ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ?
त्यति सजिलो छैन । ब्लगिङको नाममा मनमा जे-जे आयो लेखेर पोष्ट गर्न त सजिलो होला तर स्तरीय ब्लगिङ गर्न निकै कठिन छ । लेख्ने काम आफैमा सजिलो छैन, त्यस माथि व्यस्त मान्छेहरुको लागि लेख्न कै लागि समय निकाल्न निक्कै गाह्रो हुन्छ । निरन्तर रुपमा आफ्नो कुरा अरुलाई पनि पढ्न रुची लाग्ने प्रकारले लेख्न सक्नु चुनौती कै कुरा हो ।
मैले थुप्रै ब्लगहरु नियमित रुपमा पढ्ने गरेको छुँ । आफुले राम्रो लेख्न सक्ने हुनको लागि अरुले लेखेको पढ्नैपर्छ जस्तो लाग्छ । म प्राय गरेर भ्रमण,सञ्चार, प्रविधि, साहित्य तथा सामाजिक विषयमा लेखिएका ब्लगहरु फलो गर्छु ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरा पनि उठिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता?
लेखनको सबैभन्दा राम्रो पनि र चुनौतीपूर्ण कुरा भनेको श्रृजनामा कसैको नियन्त्रण हुँदैन । मुलधारका सञ्चार माध्यमबाट ब्लगिङ तथा अरु सोसल मिडियालाई छुट्याउने कुरा पनि यहि नै हो । आफुले चाहेको कुरा कसैको डर बिना स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । यसमा आचारसंहिता भए नै तापनि त्यसलाई कसले लागू गर्ने र त्यसको आधिकारिकता के भन्ने प्रश्न आउँछ । कुनै कडा आचारसंहिता भन्दा पनि ब्लगरहरु आफै जिम्मेबार भएर के लेख्ने तथा कस्ता कुरा लेख्ने अनि के नलेख्ने भन्ने कुरामा सजग हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । र अरुको ब्लग पढ्दा पनि जे जस्तो सबै कुरामा विश्वास गर्नु भन्दापनि आफैले मुल्यांकन गरेर पढ्नु जरुरी छ । मलाई सोसल मिडियाहरुलाई स्वतन्त्र नै रहन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यसबाट नै जनताको सहि आवाज र सहि तथ्य बाहिर आउँछ ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएको कत्तिको पाउनुभएको छ?
सामाजिक हितमा राम्रा ब्लग लेखिएको मैले कमै पाएको छु र लेखिएकामा पनि पाठक पनि कम रहेको जस्तो लाग्छ । सामाजिक कुराको बारेमा लेख्दा पनि कतिपयले कुनै संस्थाको गुनगान मात्र गाएको जस्ता पारामा लेखिने भएर पनि होला पाठकले पनि यस्तो कुरा पढ्न धेरै रुचाउँदैनन् । तर सामाजिक विषयमा राम्रा कुरा लेखिन निकै जरुरी छ किनभने हाम्रो मुलधारका सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता कुराका विषयमा कम मात्र लेख्ने गरेका छन् ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामी कहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
विभिन्न प्रकारका सोसल मिडियाका आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै विषेशताहरु रहेका छन् । एउटै मान्छेले चलाउने विभिन्न सोसल मिडियामा उसको प्रस्तुति फरक फरक हुन्छन् । जस्तै फेसबुकमा प्राय: व्यक्तिगत कुराहरु बढि हुन्छन्, ट्वीटरमा समसामायिक विषयमा कुरा बढी हुन्छन् । ब्लग भने, यी भन्दा फरक माध्यम हो । अहिले नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग विस्तारै राम्रो हुँदै गईरहेको छ । हुन त विश्वको अरु ठाउँहरु भन्दा अझै पनि हामी धेरै पछाडी नै छौँ तर पनि सुधार भने भईरहेको छ । गाम्रिण भागमा पनि यसको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको र सामाजिक कार्यको लागि पनि हुँदै गएको छ । यो वर्षको बाढीपहिरोको लागि राहत संकलनमा सोसल मिडियाको प्रयोग सराहनीय रहेको थियो ।
मेरो रिपोर्टको निरन्तरता तथा अँझ सफलताको लागि शुभकामना ।
Comment by Binaya Shekhar on September 18, 2014 at 5:10pm
Congratulations, Swarnima. All the best for good blogging. Look forward to read more in your blog..
Comment by Dilli Malla on September 17, 2014 at 6:58pm
साताको ब्लगर हुनुभएकोमा यहाँलाई बधाई छ । त्यो गोप्य चैं खोज्नुपर्ने भो । :P
Comment by sabita Acharya on September 17, 2014 at 3:08pm
badhai6di....tapae ko gopya blog ko barema gopya rum mai sunaunu hola hamilai .... :) keep it up di :)
Comment by Amuna Chapagain on September 17, 2014 at 2:24pm
Congratulations Swarnima !!
Comment by Prakash Lamichhane on September 17, 2014 at 10:35am
Congratulations Swarnima. :)